Doka horonantsary Yashi avy amin'ny Faritra Geographic | Martech Zone
Doka horonantsary Yashi avy amin'ny faritra Geographic
Alatsinainy, Septambra 14, 2015 Alatsinainy Oktobra 12, 2015 Douglas Karr
Raha mbola mitombo ny fijerena horonantsary dia misy ny fotoana ahafahana manatona mpihaino tena manokana amin'ny fampiasana teknika fanefena isan-karazany. miaraka Yashi, ny orinasa dia afaka manangana latitude sy longitude marina ary manamboatra tariby manodidina azy, manome ny doka ho an'ny olona mipetraka ao amin'io faritra manokana io ihany. Ny fahaizan'i Yashi mamerina mamaky teny dia manamora ny fampisehoana ny doka amin'ny olona efa nitsidika ny tranokalanao.
Yashi dia manadihady fahatsapana maherin'ny 65 miliara isam-bolana ary mamela ny mpanao dokam-barotra hahita hoe iza amin'ireo fiheverana tian'izy ireo hividy amin'ny fampiasana fomba fitadiavana maro karazana. Ireo teknika ireo dia misy ny fampiasana angona momba ny mpampiasa nomena:
Fikendrena ny toetr'andro
Marika nasionaly iray niangavy an'i Yashi hanolotra ny fampielezana horonantsary mialoha ny horonan-tsary 15 segondra, izay nandrisika ny mpijery hitsidika ny iray amin'ireo toerana 100+ an'ny orinasa ao Manhattan. Nihoatra ny tanjon'ny fampielezana i Yashi, namokatra a 80.57% Hijery amin'ny taha (VTR) ary 0.32% Kitiho amin'ny taha (FNT).
Ny teknika kendrena lehibe indrindra dia ny geotargeting. Betsaka ny vokatra sy serivisy manana fari-tany ara-jeografika, fa na ireo orinasa manerana ny firenena aza dia afaka mahazo tombony amin'ny fampielezana geolocated. Yashi dia ahafahana mikendry tariby kely manodidina fivarotana tokana, kaody zip iray manontolo, DMA, Fanjakana, faritra na firenena iray manontolo.
Ny tatitra nataon'i Yashi dia ahafahan'ny mpivarotra mandinika ny zava-bitan'ny fampielezan-kevitra isaky ny faritra, ary ny fampiasana ny Zip Code Lookup dia mety ho fomba tsara hijerena izay demografika mamaly tsara indrindra.
Tags: lasibatra dokageolocategeolocationLatitude-jarahasinayashi
Ny fiantraikan'ny fanangonana sy fanatsarana ny angona B2B ho an'ny marketing